Waggaa 8 — 16tti akkaataa itti rifeensii isaanii qoramurraa yoo jedhame dhugaadharraa hin fagaatu. Roobaleen hoggaa Malaak Saggfad gara Bagaamidir deeme, duula Shawaa keessatti jabeessee Amaaroota gara hallayyafi olqatti naqee biyya qabate.
Hawaasa keessatti paartiileen uumamtu turan jechuudha. Bara Michillee injifannoo guddaan argame garuu, Islaamootarratti ture. Ormoon sewnaa Mandayyoo, Dallofi Jamjam bara dheeraa jiraataa turanii dhawaata lafa naannoo isaaniitti siqaa, irra jiraataa dhufan.
Qoondaaloota Gadaa aangoo qabatan sirnaan muudu, eeybisu. Tokkoomni gosaa kun ammoo, walkeessatti hangafaafi quxxusuu qabu. Maammoo Mazammir, hayyoota Oromoo ajaja Hayile Sillaaseefi jalee isaatiin wareegamanidha. Seenaa qabsaayaa fi goota Oromoo Dr Diimaa Nagoo.
Hatahuu malee, geggeessaan Islaama Harar Amiir Nuur jedhamu humna walitti qabatee bara tti Habashatti duulee ture. Guyyootii jiraniif maqaa 27tu jira. Dhumarratti aadaan, polotikaafi amantiin walitti hidhatoo tahuun ifaadha. Ilman jaarsaa warra sadarkaalee Gadaa seenanii miseensa paartii tahuu hindandeenyedha. Kuusoma waggaa 32 5.
Tuulam keessatti Yuba c. Akkaataaan itti dhalli namaa naannoo isaa hubatee jijjiiru, daawwannoo dinagdeefi polotikaa kan tahe kun aadaa jedhama.
Yeroon isaas osoo hin gahinnillee waan beekamuuf sadarkaa itti aanuuf isa qopheessaa ture. Hawaasa Oromoo bara Gadaa keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya Oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni Oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna Gadaa keessatti qaama tokko. Isaaniis bakka bakkati garagar tahu.
Ilmaan kormaatu kormaatu keessa daddabran yoo seenaa, jirenya dhala Oromoo karaa polotikaa, amanti, aadaa, dinagdeefi waraanaafi kkf keessatti kan ilaalu addatti maqaa haaqabaatan malee akkaataan guddinaa, dalagaafii jireenyaa, kan ilmaan Jaarsaa wajjiin tokkuma. Yaa dhaloota ammaa jechoota gootota abbootii keenyaa kana meeqa keenyatu dammaqee hordofaa jira?
Sirna Gadaa keessatti hawaasni Oromoo gartuu lamatti qoodamee ijaarame. Kanarraa akka ilaalcha polotikaa baraatti hubachuuf waan Paartii ilaaluun gaarii taha.
Sadarkaalee Gadaa garagaraakeessatti ilmaan Oromoo dirqama dalagaa adda addaatu isa eeggata. Tuulama keessatti — Dabballee jedhamu.
Bara dhihoo dura akka waliin turan, afaan isaanii walitti seenuun ragaa nitaha. Seenaa kanarraa Amaara Saaynitiifi Bagamidritti duuluu jalqabe. Tooftaan Minilik itti fayyadame, kadhaa alaa argate qofa osoo hintaanee Oromoota gantuufi sobduu taate qabachuudhaan, Oromoodhumaan Oromoo akka cabse qorattoonni seenaa addeessaniiru.
Namuu qabeenya mataa isaa qabaatee irratti mirga guutuu qaba. Ormootaafi waaqa kana kan walqunnamsiisan qaalloota jedhamu.
Michillee booddee duulli Oromoo karaa lamaarraa tahuu jalqabe. Kun hawaasa Oromoo keessaa, bakka gargaraatti maqaa adda addaa qabata.
Sadarkaan kun, Tuulamaafi Ituu keessatti yeroo itti ilmaan kormaa aangoo qabachuuf ofqophessan, sadarkaa 4ffaa tahuudhaanifi dirqama loltummaa qabaachuudhaan tokko yoo tahan kaanirraa kanaan adda bahu.
Gaaffiin jedhu deebii argachuu waan qabuuf, mee hiika jecha Itoophiyaa jedhuufi dhuftee isaa haa ilaallu. Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. Ilmaan kormaa sadarkaa lammaffaa fixanii waggaa 16 — 24 jidduu: Raaboonni yeroo itti ilmaan kormaa Raaba tahan jedhamu, waggaa jiddutti.
Gadaa jaarsummaa ykn manguddummaati.
Afaan Amaaraatti dawwee jechun, dhukkuba lamxii jechuudha Muudana: